]I-soron ecindezelwe i-boron nitride ceramics Plate yokuphatha insimbi
I-Boron Nitride Famic Rod, eyaziwa nangokuthi i-graphite emhlophe, inesakhiwo esifanayo nge-graphite. Inokufakelwa okuhle kukagesi, ukuqhutshwa okushisayo, ukumelana okuhle kakhulu okushisayo nokuqina kwamakhemikhali.
Imikhiqizo ecindezelwe ye-hexagonal boron nitride ceramic, ibonisa inhlanganisela eyingqayizivele yemisebenzi yamakhemikhali, ebekiwe, esebenza ngomshini, okwenza ilungele ukusetshenziswa okuhlukahlukene kwezimboni eziphezulu.Singanikeza ubumsulwa obuphezulu noma ukufaka umehluko we-binder boron nitride ceramics, uqedele Isixazululo ngokususelwa ezinhlobonhlobo zezidingo zamakhasimende ezimboni.
I-Hot Press Bron Nitride iyi-insulator enhle kakhulu kagesi futhi ayidingi umswakama ukwenza njenge-lubricant. I-BN inezindawo ezingezinhle zemishini, kepha ivame ukuba namandla aphezulu okushisa okushisa, amandla amahle kakhulu ashisayo, amandla avelele we-dielectric kanye nemishini elula. Ekunciphiseni nasekupheleni kwezulu, i-BN ingamelana namazinga okushisa angaphezu kuka-2000 ℃. I-BN iza ngamamaki ahlukahlukene ahlukene ngefomu eliqinile ne-powder, konke ngezakhiwo ezihlukile.
Ukufakwa kukagesi okuhle kakhulu kanye nokuvuselelwa okushisayo kwenza i-BN ilusizo kakhulu njengokushisa kokushisa kuzinhlelo zokusebenza eziphezulu ze-elekthronikhi. Izakhiwo zalo ziqhathanisa kahle nge-beryllium oxide, i-aluminium oxide, nezinye izinto zokupakisha nge-elekthronikhi, futhi zilula ukwakheka kwezimo nosayizi ofisa.
Izindawo eziphakeme zokushisa
Ukuqina kokushisa nokumelana okuhle kakhulu kokushaqeka kwe-thermal kwenza i-bn impahla efanelekile ezindaweni eziphakeme kakhulu zokushisa okuphezulu njengemishini ye-plasma arc welding, imishini yokukhula komthombo we-semiconductor& Iyacubungula.
Isiphathimandla sensimbi esincibilikayo
I-BN ingu-inorganic, i-inert, ingekho ngokungasebenzi ngosawoti we-halide kanye ne-reagents, futhi ayimanzi ngezinsimbi ezibunjiweyo kanye nama-slags. Lezi zici, ezihlanganiswe nokunwetshwa okuphansi okushisayo, kwenze ilungele izinto ezibonakalayo ezisetshenziswa ezinhlanganweni ezahlukahlukene zensimbi ebilisiwe.
I-hot ecindezelwe yesono kanye ne-chemical vapor deposition
Amasheya amaningi, isikhathi sokulethwa cishe ngo-10-20days. ngolwandle noma ngomoya njengesicelo samakhasimende
UBoron Oxide Silicon
Boron oxide aluminium
Ukuvikelwa Kwezinga Lokushisa Kagesi (ω · cm)
UMax usebenzisa izinga lokushisa (℃)
Nge-vacuum ephezulu (isikhathi eside)
Amandla we-Three-Point eboshiwe (MPA)
Amandla acindezelayo (MPA)
I-Creansion Evechnion Coefficie (20-1000 ℃) (10-6 / K)
Ukuvuselelwa okushisayo (w / m · k)
Izinga Lokushisa Eliphezulu Furance
Izinga Lokushisa Eliphezulu kagesi zomlilo Izingxenye (Izinga Lokushisa Eliphezulu yisivikelo sleeve se Tube njll)
Metal vaporize Iziko
I Isitsha Of Metal noma Glass Melting
I-Casting Isikhunta Izingxenye Of The Precious Metal Futhi Special Ingxubevange.
Izinga Lokushisa Eliphezulu Ukusekela Ingxenye
Nozzle Futhi Ezokuthutha Tube Of The Ukuqeda Metal
- Temperature High wokuvimbela izinduku
- Thermocouple Ukuvikelwa Tube
- Iziko ngoba Melting Metal, ingxubevange, Rare Earth njll
- Iziko ngoba Electron Beam Amanzi ayahwamuka sebethule
- Nozzle ngoba amorphous Soft Magnetic Strip
- Nozzle for Metal sishaye kanye Magnetic Material Powdering
- Amanzi ayahwamuka Isikebhe
- wokuvimbela Arc futhi imshini for PV kanye Polysilicon Ignot lembuthuma
XTL babe 7000 square metres umsebenzi esitolo